Al-shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxyadii saakay ruxay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxyadii saakay ruxay magaalada Muqdisho
Xarakada Al-shabaab oo sheegtay mas’uuliyada qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee gelinkii hore ee maanta ka dhacay agagaarka xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, waxayna Shabaabku sheegeen in qaraxyadaasi ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan AMISOM iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Qaramada Midoobay (UN-ka).
Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo ah afhayeenka ciidamada Al-shabaab oo warbaahinta afkooda ku hadasha la hadlay ayaa sheegay in weerarada ismiidaaminta ahaa ee saakay ka dhacay Muqdisho ay ku dileen ciidamo gaaraya ilaa 27 oo isugu jirta kuwa Qaramada Midoobay ilaalo u ahaayeen iyo ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM.
Wuxuu Abuu Muscab sheegay in bar-tilmaameedka qaraxyadaasi ay ahaayeen xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, islamarkaana u dhaceen sidii loogu talo galay.
Dhinaca kale, wariyeyaal ku sugan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in 3 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ay ku dhinteen goobta uu qaraxa uu ka dhacay oo aheyd afaafka hore ee laga galo xarunta Xalane ee Muqdisho.
Qasaaraha ugu badan ee dhimashada ah ayaa waxay soo gaartay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaiya oo sida la sheegay ilaalo ka ahaa saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay (UN-ka) uu fadhigooda yahay xayn-daabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, kaas oo ay kaga warbixinayaan qasaaraha ka dhashay labadaasi qarax.
Si kastaba ha ahaatee, Al-shabaab ayaa inta badan qorsheeya qaraxyo ay ku weerarayaan goobaha muhiim ah ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna inta badan bar-tilmaameed ka dhigtaan mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya, Ajaanibta ku sugan gudaha dalka, iyo sidoo kale ciidamada AMISOM.